သူမရဲ့ ဝတ်စုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝေဖန်မှုတွေကို တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ Jennifer Lawrance – FemaleWear.net
The Hunger Games မင်းသမီးချောလေး Jennifer Lawrance တစ်ယောက်ကတော့ စပ်စပ်စုစုနဲ့ ဘာမဆိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောချင်နေကြတဲ့ ဝေဖန်သူတွေနဲ့ media တွေကို facebook ကနေတဆင့်ပြန်ပြီး တုံ့ပြန်လိုက်ပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့က သူမပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Red Sparrow ရုပ်ရှင်ကားကြီးရဲ့ premiere ပွဲမှာ ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဝတ်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမျိုးမျိုးဝေဖန်နေခဲ့ကြတာပါ။ သူမဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဝတ်စုံဟာ နာမည်ကြီးဖက်ရှင် brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Versace ရဲ့ pre-Fall 2018 ထုတ် design ဖြစ်ပြီး dress ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံး အနက်ရောင်နဲ့ ရွှေရောင်ကိုသာသုံးထားတဲ့ dress ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကလင့်ကိုနှိပ်ပြီး versace ရဲ့ dress ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တွေရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာအမြဲဖက်ရှင်ကျပြီး လှနေတဲ့ Jennifer လေးက အဲ့ ဝတ်စုံလေးနဲ့ ရွှေရောင်နားကပ်လေးတွေကိုပဲဝတ်ထားပြီး သူ့အမှတ်သင်္ကတဖြစ်တဲ့ smokey eye လေးနဲ့ အရမ်းကို စမတ်ကျနေခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် လူတွေဆိုတာကလဲ အခက်သားမလား?? ဘာမဆို ဆီလိုအပေါက်ရှာပြီးပြောချင်နေကြတာဆိုတော့ ချမ်းချမ်းအေးအေး London ရဲ့ ရာသီဉတုကြီးမှာ အဲ့လို ပေါ်လော်နေတဲ့ ဂါဝန်ကြီးနဲ့အပြင်ထွက်ရလားတို့၊ တူတူဓါတ်ပုံတွဲရိုက်တဲ့ မင်းသားတွေကတော့ ကုတ်အင်္ကျီတွေနဲ့လုံလုံခြုံခြုံရှိရဲ့သားနဲ့ Jennifer ကတော့ တဘက်လေး၊ကုတ်လေးတောင်မပါပါ့လားဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။
အဲ့လိုဝေဖန်မှုတွေကို ကိုယ်တွေရဲ့ အချစ်ကလေး Jennifer က ချက်ကျလက်ကျနဲ့ ပြန်ရှင်းထားတာကို သူ့ရဲ့ facebook မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆန်းကျယ်လှပတဲ့ Versace ရဲ့ ဂါဝန်လေးဝတ်ထားပြီးခါမှ ဂါဝန် လေးရဲ့အလှကိုဖုံးကွယ်စေမယ့် ကုတ်တို့၊ တဘက်တို့ ဝတ်ထားရမလားကွယ့်?? ဖက်ရှင်ကိုချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ နှင်းတွေနဲ့ ပနာရပြီးလှနေမယ့် ဝတ်စုံလေးအတွက် ငါးမိနစ်လောက် အပြင်ထွက်တာ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုပါ။
………လူတွေပြောသမျှကို အပိုတွေလုပ်ပြနေတာမျိုးကတော့ ရှေ့ဆက်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မဘာပဲဝတ်ထားဝတ်ထား ဒါ ကျွန်မရဲ့ ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်မက ချမ်းချင်တယ်,အေးချင်တယ်ဆိုရင်တောင် ကျွန်မရဲ့ စိတ်ကြိုက်သာဖြစ်မှာမို့လို့ အာရုံမနောက်ကြပါနဲ့ ကိုယ့်လူတို့ရေ!
ကဲ Jennifer လေးကို သွားမစမ်းကြနဲ့နော်။ သေသွားမယ် ရှင်သွားမယ် မသေမရှင်ဖြစ်သွားမယ် သိလား ?
Jennifer လေးကတော့ လတ်တလောမှာ သူပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Red Sparrow အတွက် premiere ပွဲတွေတက်နေတာဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို တစ်နှစ် နှစ်နှစ်လောက်ရပ်နားထားမှာဖြစ်တယ်လို့ တရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်။ သူမဟာ ၂၀၁၅ နဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွေမှာ ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံး ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တာမို့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ခဏရပ်နားလိုက်ခြင်းက သူ့ရဲ့ ကျော်ကြားမှုတွေနဲ့ အရည်အချင်းတွေကိုမှေးမှိန်သွားစေမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ရမှာပါပဲနော်…….
ကဲ Jennifer လေးရေ ယူ့ရဲ့ comeback ကို မျှော်နေမယ့်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့လို့ မှာလိုက်ချင်ပါတယ်နော်……
Tags: jennifer, red sparrow